BETBABA138 "DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!" - RESTBET501.COM GİRİŞ
BETBABA138 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!”
စူပါလိဂ်တတိယပတ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအချိန်များရှိသည်။ Galatasaray Fenerbahçeဒါဘီအတွက်အသက်ရှူကြပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
နာမည်များစွာလိုပါပဲ၊ အဝါရောင်နှင့်နက်ပြာရောင်အပြာရောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်သည့်သစ်သည် Marcel Tisserand သည်ဒါဘီအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
“ကူးစက်ရောဂါကြောင့်အပြင်ဘက်ကိုပရိသတ်တွေမမြင်ရပေမဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ လူမှုမီဒီယာကိုကြည့်တိုင်း Fenerbahce ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါတွေ့တယ်။ ငါဒီကိုရောက်တော့ Galatasaray နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းချက်ချင်းပဲငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ဒါရိုက်တာ၊ သမ္မတနှင့်ကစားသမားများကဒါဘီအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်အားပြောကြားခဲ့သည်။
Fenerbahçe – Galatasaray ဒါဘီသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ၎င်းသည် Paris-Marseille ဒါဘီနှင့်တူသည်။ ဒါဟာအရမ်းကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါ။ အငှားယာဉ်မောင်းက ‘မင်းလိုချင်တဲ့ပွဲကိုမင်းရှုံးပြီ၊ Fenerbahce ပရိတ်သတ်တွေကသူတို့ကဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကစားသမားတွေမရပ်နိုင်ရင်တောင်သူတို့စိတ်နှလုံးကိုနွေးထွေးစေမှာပါ။
ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Galatasaray သည်KadıköyရှိFenerbahçeကိုနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီပွဲဟာငါတို့အတွက်လက်စားချေစရာပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာသူတို့ကိုရိုက်နှက်လိမ့်မယ် “ဟုသူကပြောသည်။
RESTBET501 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA100 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SULTANBET561 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” SUPERTOTOBET0120 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” RESTBET501 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! RESTBET501 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! BETBABA100 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! BETBOO868 BELHANDA GALATASARAY’IN ELİNDE KALDI! BETBABA138 BEŞİKTAŞ JOSEF DE SOUZA’YI AÇIKLADI
11 Comments on BETBABA138 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!”
HANDE November 25, 2020 at 7:30 pm
ONAT November 25, 2020 at 9:40 pm
ELİF November 27, 2020 at 10:00 am
NAİL November 27, 2020 at 11:40 am
ALİ November 28, 2020 at 3:30 am
BAHA November 29, 2020 at 5:10 pm
ŞEYMA November 29, 2020 at 8:20 pm
TARKAN November 30, 2020 at 12:40 am
RAMAZAN November 30, 2020 at 3:40 am
HACI ÖMER December 4, 2020 at 3:10 am
HATUN December 7, 2020 at 12:20 am